प्लस टु पछिकाे गन्तव्य-१५
दिनेश गौतम काठमाडाै‌, ३ भदाै
कक्षा १२ पछि के पढ्ने ? कुन विषय पढेकाले के पढ्न पाउँछन् ? पढेपछि के बन्ने ? के कस्ता अवसर छन् ? विषय कसरी छनोट गर्ने ? नेपालमा के कस्ता विषयको पढाइ हुन्छ ? विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कुन विषय उपयुक्त हुन्छ ? यी र यस्तै प्रश्नलाई समेटेर कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई विषयको महत्त्व, सम्भावना, छनोट आदिका विषयमा सहयोग गर्न शिलापत्रले ‘प्लस टु पछिको गन्तव्य’ स्तम्भ सुरु गरेको हो । विद्यार्थी र अभिभावकलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो स्तम्भ फलदायी हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । आज हामीले ब्याचलर इन फिल्म स्टडिज् (BFS) बारे सामग्री तयार पारेका छौं ।
के हो फिल्म स्टडिज् ?
फिल्म स्टडी भनेको समाजका विविध विषयलाई चित्र र आवाजको माध्यमबाट कलात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्न सिकाउने शिक्षा हो । चलचित्र मनोरञ्जनको साधन मात्र होइन, साधना पनि हो । चलचित्रले समाजलाई कस्तो शिक्षा दिन्छ ? कस्तो प्रभाव पार्छ ? समाज परिवर्तनका लागि कस्तो चलचित्र आवश्यक छ ? यस्ता गहन विषयको अनुसन्धान गरेर चलचित्र बनाउन सिकाउने शिक्षा भनेको फिल्म स्टडिज् हो त्यसैले हामी चलचित्रलाई समाजको ऐना पनि भन्छौं ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालन गरिएको चार वर्षे कोर्स हो । यो कोर्सलाई मानविकी संकायमा राखिएको छ । ललित कला क्याम्पसमा कलासम्बन्धी र अन्य क्याम्पसले थोरै विषय राखेर पढाउने गरेका छन् । तर, चलचित्रको मात्र पढाइ भने ओस्कर इन्टरनेसनल कलेजमा मात्र हुने गरेको छ ।
कति खर्च गर्नुपर्छ ?
चार वर्षे कोर्सका लागि कम्तीमा ५ लाख खर्च लाग्छ ।
चलचित्रको कथा लेख्ने
साउन्ड रेकर्ड गर्ने
चलचित्रबारे अनुसन्धान गर्ने
चलचित्र विकास बोर्डले छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । त्यस्तै, क्याम्पसले आफ्नो क्षमताका आधारमा पनि छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले समेत सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
इन्टर्नसिप अनिवार्य नभए पनि ७० प्रतिशत प्रयोगात्मक (प्राक्टिकल) र ३० प्रतिशत सैद्धान्तिक (थेउरी) हुन्छ । अन्त्यमा प्रोजेक्ट वर्क अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चलचित्रमा मास्टर्स गर्न विदेश जाने अवसर पनि छ । नेपालमा चलचित्रसम्बन्धी मास्टर्स लेभलको कोर्स नभएकाले विद्यार्थी अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोप पुग्ने गरेका छन् । त्यस्तै, चलचित्र प्रदर्शन र फिल्म फेस्टिभल जस्ता कार्यक्रममा पनि विदेश जाने अवसर मिल्छ ।
समाज परिवर्तनका लागि चलचित्र
मनोजबाबु पन्त, निर्देशक, ओस्कर कलेज
नेपाल कला र संस्कृतिको धनी देश भएर पनि हामी पछि परेका छौं । विशेष त चलचित्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि राम्रो छैन । कला र संस्कृतिबारे चेतनास्तर कमजोर छ । चलचित्रलाई मनोरञ्जनको साधन मात्र ठानिन्छ ।
हिरो, हिरोइनी नाच्ने, भिलेन आउने र फाइट खेल्ने सोचिन्छ । तर, चलचित्रको दायरा फराकिलो छ । नेपाली कला र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्दै समाजमा भएको यथार्थलाई चलचित्रको माध्यमबाट देखाएर समाज परिवर्तनका लागि चलचित्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । राम्रा चलचित्र बनाउन चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न फिल्म स्टडी आवश्यक छ ।
समाजका विषयवस्तुलाई पर्दामा उतार्नुपर्छ
पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र उद्योगमा सफल निर्देशकका रूपमा निश्चल बस्नेतको नाम आउँछ । फिल्म स्टडी पढेर निर्देशनमा लागेका बस्नेतले निर्माण गरेका चलचित्र चर्चित भएका छन् । समाजका विषयवस्तुलाई पर्दामा उतारेका कारण पनि उनले बनाएका चलचित्र सफल भएका छन् ।
‘चलचित्रमा टेक्निकल कुरा हुन्छ, ती कुरा पढेर थाहा पाउन सकिन्छ,’ उनले भने । यदि पढेर र बुझेर काम गर्ने हो भने सफल हुन सकिने उनको अनुभव छ ।
चलचित्र समाजको ऐना
दीपा बस्नेत, निर्देशक
सानैदेखि उनी कथा प्रस्तुत गर्न चाहन्थिन् । अहिले उनको रहर पूरा भएको छ । । फिल्म स्टडी पढेपछि उनी महिला निर्देशकका रूपमा चलचित्र उद्योगमा छाइन् । केही समय मेडिकल सेक्टरमा समेत काम गरिन् ।
तर, रुचिको विषय चलचित्र भएकाले उनले मेडिकल सेक्टर छोडेर चलचित्र क्षेत्रमै लागिन् । मेहनत र लगनशीलताले अहिले उनी सफल भएकी छन् । फिल्म स्टडी पढेर यो क्षेत्रमा लाग्ने हो भने नाम र दाम कमाउन सकिने उनको विश्वास छ ।
जीवन भनेकै कलाकारिता
अभय बराल, कलाकार
अभय बराल सानैदेखि अभिनयमा पोख्त थिए । स्कुलमा अभिनय गर्दा साथीभाइले उनको तारिफ गर्थे । त्यही तारिफले उत्प्रेरित भएर आज उनी कलाकार भएका छन् ।
कलाकारिताबारे बुझ्दै गएपछि उनले कलाकारितालाई निखार्न फिल्म स्टडी पढे । अहिले उनले विभिन्न चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् । चलचित्र क्षेत्रमा संघर्षरत अभय कलाकारिताबाट पछि नहट्ने पक्षमा छन् ।
‘जीवन भनेकै कलाकारिता हो,’ उनी भन्छन्, ‘मैदानबाट भाग्ने होइन, हरेक कुराको सामना गर्नुपर्छ । यसपछि सफलता हात पार्न सकिन्छ ।’
नेपाली चलचित्र उद्योग अझै फस्टाउन सकेको छैन । बलिउड र हलिउडको तुलनामा धेरै पछाडि छ, नेपाली चलचित्र उद्योग । यद्यपि, पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र पनि दर्शकको रोजाइमा पर्न थालेको छ ।
सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र सफल भएका छन् । एकपछि अर्को चलचित्र बनाउने क्रम बढ्दो छ त्यसैले यस क्षेत्रका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नै फिल्म स्टडी आवश्यक छ । अर्कोतर्फ चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले पनि वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ३, २०७६, ११:१६:००